Maxaad ka taqaan ciidamada ‘Puntland Security Force (PSF)’ ee Mareykanku maalgaliyo? (dhegayso) – Radio Daljir
Noofember 24, 2018 6:54 g 0
Waa hubaal in aad maqashay Puntland Security Force (PSF), maxaad se ka taqaan? Yaa maamula, yaa se maalgaliya? Yey hoosyimaadaan? Intee se saldhig ciidan bay Puntland ku leeyihiin?
PSF waa Ciidamada Ammaanka Puntland. Ma aha Ciidamada Daraawiishta Puntland. Ma ilaaliyaan xudduudaha Puntland. Ma taageeraan Ciidamada Daraawiishta Puntland. Waa ciidamo la dhihi karo dhidibkoodii hore waxaa loo dhisay in ay si dadban ugu dhigmaan qaab-dhismeedka Hay’adda Sirdoonka Qaranka (NISA). Ma se aysan noqon, maantana ma aha.
PSF waxaa maalgaliya Dowladda Mareykanka, siiba Ciidamada Qalabka Sida ee Mareykanka iyo Taliskooda AFRICOM ee Stuttgart, Germany, toosna hadda u hoosyimaada Taliska CJTF-Horn of Africa (@CJTFHOA). Lama yaqaan miisaaniyadda billaha ee PSF waa se la qiyaasi karaa.
Meesha la yaqaan bogga NISA lama yaqaan bogga PSF-ta oo hadba maalin, ku xiran hadafka taliska sare iyo mushaar-qaataha cusub, hadba waa bog iyo xiriir horleh, badanaana waa Wajibuug (ama Facebook), sida boggaga PSF, P.S.F ama Puntland PSF.
Dhanka Twitterka (ama Shimbirta) ciidamada ammaanka Puntland waxa ay daganaayeen cinwaanka PSFForces illaa iyo Maarso 2017, kamana aysan badan boggaas illaa iyo hadda. Sababta dagganaanshahaas qoraalada danbe kala soco.
Su’aalo isweydiin mudan
La iskuma hayo in difaac adag ciidamada PSF kaga jiraan aagagga Mudug iyo kuwa buuraleyda silsiladda Golis ee Cal Madow iyo Cal Miskaad. Saas oo ay tahay su’aalo badan baa haddana mudan in la isweydiiyo, sida: Waa maxay hadafka ciidamada PSF? Yaa masuul ka ah taliska guud ee ciidamada PSF? Yaa hore u hayn jiray? Yaa hadda haya taliska Bossaso? Kan CUSUB ee Badhan? Kan Qardho? Kan Gaalkacyo? Waa se maxay xigto ahaan xiriirka ka dhexeeya dhammaan taliyayaasha talisyadaas?
Isweydiimada hab-maamulka ciidamada PSF talisyada kaliya kuma koobna, ee su’aalo kale baa waxa ay yihiin: waa maxay xiriirka xigto ee ka dhexeeya dhammaan talisyada ciidamada PSF? Maxaa se illaa iyo hadda laga qabtay cabashooyinka isa soo taraya ee Ciidamada Ammaanka Puntland ee dhanka musuqa siiba dhanka Taliska Guud ee PSF-ta iyo taliyayaasha dhammaan aagagga PSF-ta?
Dhanka miisaaniyadda, waa maxay miisaaniyadda billaha ee ciimamada PSF? Xaggee ka timaada bil walba? Sidee ku timaadaa? Xaggee soo martaa? Sidee loo kharash gareeyaa bil walba? Yaa mushaar ka qaata bil walba? Yaa sirdoon ugu qoran oo bil walba u soo xaadira mushaar? Ma sirdoon ka shaqeeya danaha difaac ee Puntland mise mushaar qaate? Waa kuwee mushaar-qaatayaasha aan dano difaac iyo kuwo sirdoon ka shaqayn? Ma laga yaabaa in aad adba taqaan?
Su’aaluhu intaas kaliya kuma koobna ee su’aalo kale oo Radio Daljir dabagali doono ayaa ah: “yaa ku faa’iidey oo maanta ku ladan mushaarkii loogu talagalay Ciidamada Ammaanka Puntland, maxay se ka yiraahdeen ciidamadu?”
Su’aalo kale …
Su’aalo kale oo taxanayaasha qoraalaadda Daljir ka mid noqon doona waxaa kamid ah: PSF maxay kala socotaa, maxay se ka qabatay dilalka sida joogtada ah loola beegsado nin-doorka Puntland, siiba kuwa ka dhaca magaalooyinka waaweyn ee talisyada sare ee PSF-ta, sida Bossaso iyo Gaalkacyo? Maxaa se sababa in dilalka nin doorka Puntland aysan ka dhicin meelaha ka baxsan taliska ciimadama PSF-ta?
Mid kale ayaa ayana ah, maxaad kala socotaa ganacsiga taliska PSF ay ka barbar-abuureen miisaaniyadda Ciidamada Ammaanka Puntland?
Haddii aad hore u yaabaneyd, ha yaabin, laakiin haddana sii yaab oo Daljir kala soco warbixinno u kuurgala Taliska Ciidamada Ammaanka Puntland (Puntland Security Forces – PSF).
Isweydii PSF ma ciidamo Ammaan ee Puntland baa, ma ciidamo magac-u-yaal ah baa, mise waa ciidamo ammaan oo hadafkoodii hawlkarnimo iyo difaac Puntland la dhaafsaday miisaanayid shakhsi iyo dano gaar ah?
Fadlan haddii aad hayso xog Ciidamada Ammaanka Puntland (PSF) nala qaybso oo u soo dir: [email protected]
HA AAMUSIN EE SU’AALO ADAG ISWEYDII. HADDII AADAN ISWEYDIIN KARIN DADKA WEYDII, OO OGOOW “WIXII LA QARIYO QURUN BAA KU JIRA!”
Siyaasadda & Dhaqaalaha 411 Wararka 13969
Sheeko Gaaban: Guuldarro Jacayl God ma loo Galaa! (Taxanaha 15aad – dhegayso/daawo)